Tsy manampy ny olona mivantana, fa miara-miasa amin'izy ireo hioitra ny ATD Quart-Monde - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Araka izay anarany izay, dia mahatsiaro manokana ireo olona miaina anaty fahasahiranana lalina ity firohotana ity. Ary mijoro sy miara-miasa amin'ireo olona tena sahirana mba hahitan'izy ireo ny vahaolana. Noporofoin'izy ireo àry fa azo resena ny fahantrana na mandifotra toa inona aza. Fifampizarana.
"Nipetraka nanamorona ny lalam-by teny amin'ilay antsoina hoe La Réunion kely aho taloha. Teny no nifankahafantarako tamin'ny ATD Quart monde. Ary fikarakarana famakiam-boky ankalamanjana no fiaraha-miasa nataonay voalohany. Izao aho efa manana trano fonenana eny Andramiarana." Izay no tenin-dRakotondrabe Jean Pierre, raiamandreny iray, raha namintina ny tantarany izy. Nambarany fa ezaka avy aminy mihitsy ilay nioitra tamin'ny fiainana, fa torolalana sy fampaherezana no natao azy.
Raha zohiana ny lalam-piainan'ity raim-pianakaviana ity, dia anisan'ireo olona tsy manan-kialofana izy fahiny, ary rehefa tojo ny mpitarika hanavotra azy amin'izany, dia tafavoaka satria tsy niandry fotsiny ny hotolorana fanomezana kely, fa tena nitady izay varavarana hivoahana amin'ny maha mponin'i La Réunion kely azy. Ity toerana ity, dia ao Antananarivo renivohitra, mbola ahitana fianakaviana manorim-ponenana foana ao mandraka ankehitriny. Lalam-by zary tanànan'ireo olona sahirana. Nandalo teny ny Minisiteran'ny mponina, fa tsy nahovoka. Nandalo teny ny fikambanana tsy miankina fa tsy mbola niova ny eny. Satria raha vao vahaolana vonjimaika no atao, dia voatazona eo amin'ny toerana misy azy eo foana Rafahasahiranana. Toa mampirisika ny mpatory an-dalana hijanona eny na tsy mety aza ny fanolorana azy lamba firakotra. Dia mitsitaitaika koa ny mpanome sakafo masaka na manta. Toa maneho ilay fo mangoraka fa mandalo dia lasa.
Samy manao izay ataony avokoa manoloana ny fahasahiranan'ny Malagasy. Ny kitranotrano sase fahiny izao efa nisy nanova ho kaontenera. Jereo koa fa misy mihitsy manao ho fitadiavam-bola any ivelany ny sary alainy eny ambany tanàna. Fa tsy mbola nahafoana ny fahantrana izany. Mihamitombo aza ireo mpatory an-dalana. Ary mihabe mponina ny eny ambany tanàna. Ny fantatra kosa, dia misy olona mahantra, izy tenany mihitsy no manana fahavononana hiala amin'ilay toerana misy azy. Toa an'i Jean Pierre mianakavy. Ka mora kokoa ny mitarika azy amin'izany.
Antohomadinika IIIG Hangar
Raha miresaka fahantrana isika, dia mby an-tsaina ny faritra ivan'Iarivo. Iray amin'ireny ny ao Antohomadinika. Tanàna be olona, be elakelan-trano, be lakan-drano maloto, be fako, be fofona koa aza noho ireo miparitaka. Tsy misy lalany manokana ny rano maloto any, fa sady lalan-kely izorana no fanariana rano maloto. Dia miara-mipetsapetsa ao. Ary rehefa fahavaratra tafiditra an-trano ny rano maloto. Tsy misy drafi-panajariana araka izany fa samy manorina izay tiany haorina. Eny no monina ry Rakotondratafika Joseph sy ny ankohonany. Manan-janaka 6 izy, ary mpivarotra mandehandeha no asany tamin'ny fahatanorany. Olona tena sahirana izy, raha ny filazany, saingy niavotra rehefa niara-niasa tamin'ny ATD Quart monde. "Nitarika anay hamorona izy ireo, ka nahatsangana orinasakely izahay. Orinasa mpanao menaka, mpanjaitra, mpandrafitra ary ny zanakay no nanohy azy rehefa nihalehibe toa izao izahay. Tsy nanome vola izy ireo fa nanentana sy nampirisika anay hahazoanay mitady vola. Ary tena nanova anay izany." Toa manaporofo izany teniny izany fa poizina ny fanomezana sy fizarana vola ho an'ireo olona sahirana. Fa ny fanokafana ny sainy ahafahany mivelatra sy mamelon-tena no tsara ilofosana. Manamafy izany indrindra i Voahangy Nirina : "Afaka tamiko ny tahotra hiditra birao ka nanao karapanondro sy kopian'ny ankizy aho. Dia nanaraka fiofanana ka nanjary mahaleo tena." Miankina amin'ny paika enti-miady araka izany no handresena na tsia ny fahantrana.
Hatramin'ny taona 1987 no efa nametraka ny andro handavana ny fahantrana lalina ny ATD Quart monde. Iraisam-pirenena izy io ary misy sampana eto Madagasikara izay tantanin'i Dr Zoé Randriana. Izy ireo no efa nialoha lalana ny Firenena Mikambana amin'ity resaka ity, ary P. Joseph Wresinski no loharanony. Ity andro ity àry no hihainoana ny feon'ireo olona tena mahantra, hanairana ny olom-pirenena sy ny tompon'andraikitra samihafa. Tamin'ity taona ity, dia toa izao ny lohahevitra nifampizarana maneran-tany : " Miasa miaraka hahazoana ny rariny sy hitsiny ara-tsosialy sy ara-tontolo iainana ho an'ny rehetra." Niezaka araka izany olona anaty fahantrana lalina mikajy ny tontolo iainana manodidina azy. Anisan'izany ny fanodinana ny fako ho akora mbola azo ampiasaina indray. Misy amin'izy ireo rahateo no mivelona amin'ireny dabam-pako ireny. Teny amin'ny trano famakiam-boky Fanovozantsoa Wresinski Antohomadinika no nifampizaran'izy ireo izany ezak'izy ireo ho fiarovana ny tontolo iainana izany.
Ankoatra izany, dia misy koa ny ezaka hafa nahitam-bokatra : "Misy fototra maromaro eto amin'ity Fokontany iasanay ity, hoy Dr Zoé Randriana, mpitantana ny ATD Quart monde. Nahatsangana tranom-boky izahay, nanao lalan-kely, nisy fiainana niova tany amin’ny isam-pianakaviana. Marihina fa tsy manampy ny olona mivantana izahay, fa miara-miasa amin'izy ireo. Miainga avy any ifotony izahay mitady vahaolana tsikelikely hamahana ny olan'izy ireo."
Rahefa mandinika ny fiainan'ny Malagasy ankehitriny isika, any anaty fiarahamonina any, dia hita mibaribary ny hantsana manasaraka ny mahantra sy ny manan-karena indrindra taorian'ny fihibohana noho ny aretina covid 19. Misy fianakaviana an-dalampananganana tranobe kanefa misy miady amin'ny kapoaka isan'andro. Samy miaina anaty fiarahamonina iray anefa ireo. Manaitra ilay fitondrana repoblikana manoloana izany. Satria "na aiza na aiza misy olona miaina anaty fahantrana lalina, dia voahosihosy ny zon'olombelona. Adidy masina ny mivondrona mba hampanajana izany zo izany". Manan-jo hiaina anaty trano fonenana sahaza, hisakafo ara-dalàna, hampiana-janaka, hitsabo tena, hahazo fotodrafitrasa…sns, ny rehetra.
Eto am-pamaranana, dia atsipy ny teny any am-pon'ny mahalala. Azo eritreretina ny mampiantso ny olona sahirana, eny amin'ny faritra iva ka mandefa azy ireo any amin'ny faritra niaviany ho an'izay mazoto amin'izany. Dia omena ny tan-tsoroka mifanaraka amin'izany izy ireo. Ho an'ny eo an-toerana indray, ho sarotra ny ady raha tsy miova mihitsy aloha ny faritra iva. Azo saintsainina ny Famondronana ny trano fonenana ho lasa fotodrafitrasa iray. Tsy misy manorinorina kely toa io sary fahita io fa azo ravana ireny, dia soloina iray goavana. Mba hahazoana toerana malalaka. Hatao zaridaina ohatra, ho an'ny fikajiana ny tontolo iainana. Dia misy natokana handehanan'ny rano maloto, natokana ho toeram-pidiovana, natokana ho tsena, natokana ho lalana, dia tsy hiditra an-trano intsony ny rano maloto sy ny fakofako entiny.
Ary hiova ho toeram-ponenana mahatamana sy mahafinaritra ilay ambany tanàna.
Fiainam-bahoaka : Hadino ny vahoaka, ny seho ivelany hatrany no misongadina - il y a 4 jours